Kushangaza - Suaíli - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: kushangaza (Suaíli - Birmanês)
သို့ဖြစ်၍သူ၏ဆရာတို့သည်လည်း ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ဟောသောဆရာဖြစ်ယောင်ဆောင်လျှင်၊ အဘယ်ဆိုဘွယ်ရှိသနည်း။ သူတို့သည် ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်အတိုင်း နောက်ဆုံး၌အကျိုးအပြစ်ကို ခံရကြ လတံ့။
Naye akawajibu, "Hili ni jambo la kushangaza! Ninyi hamjui ametoka wapi, lakini amenifumbua macho yangu!
သူသည် အကျွန်ုပ်မျက်စိကိုဖွင့်သော်လည်း အဘယ်ကဖြစ်သည်ဟု သင်တို့မသိကြသည်ကို အံ့ဩ ဘွယ်ရှိ၏။
တဖန်တုံ၊ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကို ပြီးစီးစေသော နောက်ဆုံးဘေးဒဏ် ခုနစ်ပါးရှိသော ကောင်းကင်တမန်ခုနစ်ပါးတည်းဟူသော၊ ကောင်းကင်၌ အံ့ဘွယ်သော နိမိတ်ကြီးအခြားတပါးကို ငါမြင်ရ၏။
acionar o seguro (Português>Inglês)выноска (Russo>Inglês)mera pet dard ho raha hai (Hindi>Inglês)cintai aku karna allah (Indonésio>Árabe)excuse letter have an headache (Tagalo>Inglês)ako ay pang apat sa aming magkakapatid (Tagalo>Inglês)nediskriminuojantys (Lituano>Inglês)digne de (Francês>Inglês)tao lang ako at nagmamahal sayo ng tapat (Tagalo>Inglês)kasa ho sub (Hindi>Inglês)pinapalawak ang pasensya (Inglês>Tagalo)fejldiagnosticering (Dinamarquês >Inglês)saya dah pergi ambil semalam (Malaio>Inglês)overleg met dakwerker (Holandês>Francês)calcones (Espanhol>Inglês)without music, life would beamistake (Inglês>Hindi)in navolging op onderstaande mail (Holandês>Inglês)quantas pessoas queiam (Português>Inglês)dia menumpang tinggal di rumah saya (Malaio>Inglês)clammy (Inglês>Italiano)mujhe ghav lag gya (Hindi>Inglês)बीपी पिक्चर , (Inglês>Hindi)mozão (Português>Inglês)corresponds (Inglês>Hindi)